Amboary ny Apple Watch izay miraikitra amin'ny paoma | Vaovao IPhone
Sambany izay nitranga tamiko, fa efa nahita tranga maro tamin'ny Apple Watch voasakana isika mampiseho ny paoma mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Araka ny nanjo ahy ary voavahaiko izany nefa tsy narahiko ny vahaolana natolotr'i Apple -nateriko tamina serivisy fanampiana ara-teknika-, Te hizara aminareo ny vahaolana aho.
1 Ny zavatra voalohany dia ny faharetana
2 Ny zavatra faharoa dia ny fanerena ny famerenana indray
3 Ny zavatra fahatelo dia ny manafoana ny bateria
4 Ny zavatra fahefatra dia ny mahita ny Apple Watch
5 Ny zavatra farany farany dia ny mankany amin'ny fanohanana ara-teknika an'ny Apple
Ny zavatra voalohany dia ny faharetana
Imbetsaka dia ny fahatsapantsika manokana ny fotoana no olana. Ny Apple Watch, indrindra ireo taranaka voalohany, afaka maharitra ela ny fanavaozana ary toa mikatso.
Raha ny amiko, niseho ny paoma rehefa nametraka ny fanavaozana farany. Navelako nifandray nandritra ny alina teo amin'ny fotony izy io mba hahitana raha fotoana fohy fotsiny io. Saingy nifoha izy ary mbola nitovy ihany, ka nieritreritra aho fa tsy ny tsy faharetako izany.
Ny zavatra faharoa dia ny fanerena ny famerenana indray
Tsy hanandrana an'ity fanafody ity aho raha tsy mahazo antoka ny hevitra voalohany, satria ny hery mamerimberina rehefa manavao dia mety hahatonga ny zavatra ratsy kokoa.
Mba hanaovana famerenana an-kery dia tsy maintsy manindry sy mitazona ny bokotra roa an'ny Apple Watch (satro-boninahitra sy bokotra) farafahakeliny 10 segondra. Fa raha ny tena izy, tsy maintsy miandry isika mandra-pahatonga mainty ny efijery (manjavona ny paoma) ary hiseho indray. Avy eo mamoaka ny bokotra isika.
Ny zavatra fahatelo dia ny manafoana ny bateria
Averina indray, ny faharetana. Raha aorian'ny fanerena ny famerenana (azonao andramana imbetsaka raha tianao) dia tsy mampiseho zavatra hafa ankoatry ny paoma, Tsy maintsy avelantsika eo ambony latabatra izany ary avelantsika hisintona.
fampitandremana: Tsy mbola nahita an'izany aho na taiza na taiza, saingy niasa toy izany tamiko, ary izany no ilazako aminao. Ny olona dia saro-pady tokoa amin'ny fikarakarana bateria tato ho ato, ary na dia tsy maninona aza ny manao azy indray mandeha, dia tsy tokony hatao ny famoahana bateria lithium tanteraka. Farafaharatsiny izany no lazain'izy ireo.
Ho avy ny fotoana izay tsy tokony hamerenana indray ny fanerena ny famerenana indray (zavatra hafahafa, satria, araky ny anarany dia terena izy io). Fa kosa, hasehony ilay bibilava izay manondro fa tokony hametraka ny Apple Watch hitaky vola ianao. Tandremo izy, apetraho amin'ny entana ary mankanesa amin'ny dingana fahefatra.
Ny zavatra fahefatra dia ny mahita ny Apple Watch
Mandehana amin'ny app "Find My iPhone" (izao dia antsoina hoe "Find") avy amin'ny iPhone-nao ary safidio ny Apple Watch. Mazava ho azy fa hilaza aminao izy fa tsy eo io. Tsindrio ny "Ampahafantaro rehefa hita" sy ny "Play sound."
Ary izao indray, faharetana. Rehefa velomina ny Apple Watch (ho hitanao ny fomba amin'ity indray mitoraka ity raha toa ka miverina tsara), dia hilalao ny feo izy io, ary ho fanampin'izany dia hampandre ny iPhone fa nahitana azy.
Hamarino tsara fa akaiky ny Apple Watch ny iPhone ka ny Apple Watch dia manana fifandraisana Internet.
Ny zavatra farany farany dia ny mankany amin'ny fanohanana ara-teknika an'ny Apple
Raha tsy mahomby daholo ny hafa rehetra, ny dingana fahadimy dia ny mankany amin'ny Apple technique. Ny Apple Watch dia roa taona mahery (ary very ny tapakila), ka tsy ho voasaron'ny fiantohana izany. Mazava ho azy, raha manana izany ianao eo ambany fiantohana, ity dingana fahadimy ity no zavatra voalohany tokony hatao. Voavaha ho anao koa ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fanamboarana Apple Watch izay mihamangatsiaka mampiseho ny paoma Apple
Roa andro lasa izay dia nanery ny hamerenana indray aho ary teo no namboarina ny paoma, sambany aho no nitranga ary manana fiambenana hatramin'ny andro voalohany namarotana azy tany Espana aho, na izany aza, nanery ny famerenana indray dia voavaha, tsy maintsy misy bibikely vitsivitsy amin'ilay kinova farany
Nacho Aragonese dia hoy izy:
Salama Ricky! Hatramin'ny namoahako azy dia maro no nifandray tamiko nilaza fa izy ireo koa. Ka eny, toa tena misy ifandraisany amin'ny kinova farany an'ny watchOS. Manantena aho fa ireo izay hitranga dia manampy azy ireo izany.
Valiny tamin'i Nacho Aragonés
alexriv dia hoy izy:
Ny fanerena ny famerenana indray indray dia voavaha, tsy maintsy misy ny tsy fahombiazan'ny kinova farany
Valio amin'i Alexriv
alex zeuss dia hoy izy:
Manatevin-daharana ny lisitry ireo tratry ny fianjerana aho taorian'ny fanavaozana ny kinova rindrambaiko farany ... na izany aza, lavitra ny famahana azy, raha ny amiko dia mbola mitranga isaky ny mamily famantaranandro aho. Manantena aho fa hamboarin'i Apple tsy ho ela io olana io amin'ny patch.
Valiny tamin'i Alex Zeuss
Toy izany koa no mitranga amiko. Nisafidy ny tsy hamela azy io aho, ny fotoana farany nandaniako vola be. Manantena aho fa handamina azy io tsy ho ela.
John Gomez dia hoy izy:
Azonao atao ihany koa ny manaisotra ny iPhone ho safidy farany, mandeha izy, ny olana dia miadana izy ary tonga ny fotoana hampiarahana azy ireo indray.
Valiny tamin'i Juan Gomez
Mitranga amin'ny maodely rehetra ve izany? Mitranga amiko ao amin'ny Apple Watch andiany 0 sy andiany 1 an'ny havany izany. Ao amin'ny andiany 3 ve no mitranga?
Richy dia hoy izy:
Ao an-trano dia manana andiany 1 sy andiany 3 izahay, ary mitranga amintsika koa izany. Mieritreritra aho fa rehefa apetrakao fotsiny izy io ary tsy hiala eo mihitsy izy io.
Valiny tamin'i Richy
divay dia hoy izy:
izany koa no mahazo ahy. Matetika aho no mamono azy io ary isaky ny mamadika azy aho dia mihantona ary tsy maintsy manao ny reboot aho. Izany dia nitranga tamiko hatramin'ny nanovako azy tamin'ny kinova farany.
Mamaly an'i vin
Fantatrao ve hoe rahoviana no mivoaka ny fanavaozana manaraka? Manana andiany 3 aho ary izany dia nitranga tamiko taorian'ny fanavaozana farany ..
Ade dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko ... Rehefa alaina izy io dia apetrako matetika eo amin'ny toeran'ny Belkin fa miaraka amina kinova farany an'ny rindrambaiko dia mitazona ny paoma. Raha apetrako amin'ny charger iPad dia alefa ho azy ilay izy ary manjavona ny paoma
Mamaly an'i Ade
Toy izany koa no nanjo ahy sy ny zanako lahy, niaraka tamin'ny andiany 2 an'ny roa 42mm Watch. Nifandray tamin'i Apple Care aho (mbola eo ambany fiantohana izy ireo) ary nandamina fotoana izy ireo tao amin'ny Apple Store. Rehefa noraisiko izy ireo dia nanao ny tsy nety izy ireo ary raha sanatria ka nandrakitra horonan-tsary tamina timer aho dia ho hitanao hoe inona ny olana. Rehefa afaka andro maromaro dia nilaza tamiko izy ireo haka azy ireo. Natolotr'izy ireo tamiko fa nilaza izy ireo fa nanangana ny rafitra tamin'ny fomba lalina kokoa noho izay azoko natao. Ny tolakandron'io ihany dia niverina ny olana. Nentiko niverina izy ireo ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia nilaza tamiko indray izy ireo mba haka azy ireo. Naorin'izy ireo indray ny zanako lahy ary nosoloiny vaovao ny zanako ary eto izahay. Ny ahy dia manana ny kinova taloha, 4.2.3 (ary tsy mikasa ny hanavao izany aho, mazava ho azy). Heveriko ihany koa fa olan'ny rindrambaiko io ary mieritreritra aho fa amin'izao fotoana izao dia tokony efa fantatr'i Apple ny zava-mitranga ary ampahafantaro azy ireo mpampiasa na hanome toky anay na hanambara programa toa ny efa natao tamin'ny fitaovana hafa tamin'ny fotoana hafa. Fiarahabana sy faharetana (fanafody inona izany)
Nitranga tamiko ihany koa izany ary nanatanteraka ny reset dia niverina tamin'io fotoana io ihany aho. Efa nanao fitsapana maro izy ary tsy nisy. Heveriko fa ny dingana manapa-kevitra dia ny laharana faha-4, rehefa mampandeha ny «Hikaroka famantaranandro paoma» amin'ny iphone, ary ampahafantaro ahy rehefa hita io. 3 minitra teo ho eo taty aoriana dia naheno ilay feo aho, tsindrio ny bokotra manaiky ary avy eo dia mandeha indray toy ny taloha.
Wow, fanamaivanana izany. MISAOTRA ANAO.
Carlos Salas - Cordoba- Arzantina dia hoy izy:
Safidy tena tsara "hitady ny IPHONE" hahatonga ny Apple zanako voalohany hijery amin'ny maodelin'ny paoma mandritra ny roa andro. Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara tsara toy izany.
Valiny tamin'i Carlos Salas - Cordoba- Arzantina
Misaotra betsaka anao tamin'ny fanohananao, tena nilaina izy io, efa nampiasa 3 andro ny famantaranandroko paoma tamina fombam-paoma ... Noheveriko fa very izany. Naveriko imbetsaka ilay izy ary ny zavatra farany dia ny fikarohana famantaranandro paoma ary rehefa afaka minitra vitsivitsy dia natomboka indray izany. Misaotra betsaka.
Misaotra betsaka, tamin'ny safidy "Search" dia voavaha tao anatin'ny segondra vitsy.
Tena tsara izany! Nanaraka ny dian-tongotrao aho ary saika tsy nisy faharetana dia nahomby!
Jose San Martin dia hoy izy:
Nanandrana ny tetika rehetra, fa tsy nisy nety tamiko.
Tsy manana ny Apple Watch intsony aho - Series 1 - mifandray amin'ny iPhone ka tsy afaka manao dingana 4 aho, misy mahalala fomba hafa ve, misoroka ny fitondrana izany amin'ny serivisy teknika raha azo atao? (vidiny manodidina ny € 220)
Valiny tamin'i Jose San Martín
Toy izany koa no mitranga amiko, tsy azoko intsony ny mampifandray azy ary tsy misy fomba hamadihana azy, mijanona ny paoma ……. Misy mahalala ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny iphone hanaovana ny dingana fahefatra?
Salama! Manana famantaranandro paoma faharoa aho, lasa be ny hatsiaka rehefa manao fanatanjahan-tena aho, ny olana amin'ny Bluetooth ary ny famonoana azy dia "miraikitra" amin'ny paoma, tsy maintsy nesoriko ary namboariko tamin'ny telefaona. Voavaha izao.
NADIR KACI dia hoy izy:
tsara, ny ahy andiany 1, rehefa apetrako azy io dia mipoitra ny paoma ary nanjavona tsy an-kijanona fa tsy mandoa na mamono, fanampiana kely azafady, misaotra.
Valio amin'i NADIR KACI
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 11.2.6 i Apple, tsy afaka mampihena ny iOS 11.3 intsony izahay
Hetsika Spotify ho an'ny 24 aprily any New York